राष्ट्रिय सभाको औचित्य प्रमाणित गर
जनतापाटी आइतबार, भदौ २१, २०७७ मा प्रकाशित
सत्तारुढ नेकपाले पार्टीको आन्तरिक विवादलाई मथ्थर पार्नको लागि उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने कोटामा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ । गौतम पछिल्लो आम निर्वाचनमा बर्दियाबाट पराजित नेता हुन् । यस अगाडि गौतम जस्तै गत आम निर्वाचनमा पराजित रहेका पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय सभाको सांसद बनाइएको छ । र, अब यी दुवै नेतालाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित मन्त्री बनाउने तयारीमा सरकार र नेकपा रहेका छन् ।
दुई सदनात्मक संसदिय व्यवस्था भएका कुनै पनि देशमा सरकारको नीति निर्माणमा योगदान दिन सक्ने समाजका प्रतिष्ठित तथा विज्ञहरुलाई माथिल्लो सभामा मनोनित गर्ने प्रचलन छ । माथिल्लो सभा गठनको मूलभूत सार नै त्यही हो । नेपालको संविधान २०७२ ले पनि त्यहीकुराको कल्पना गरेको छ ।
तर, नेपालका प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुले गठन भएको दिनदेखि नै संविधानले नै परिभाषित गरेको राष्ट्रिय सभाको मर्ममाथि प्रहार गर्दै आइरहेका छन् । र, त्यसरी राष्ट्रिय सभालाई पंगु बनाउन सत्तारुढ नेकपाको मुख्य भूमिका देखिएको छ । समाजका प्रतिष्ठित, विज्ञहरुलाई भन्दा पनि पार्टी भित्रको गुटको सन्तुलन मिलाउन राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरु चयन गर्ने प्रवृत्तिले शुरुको दिन देखि नै त्यसको औचित्य माथि प्रश्न उठिरहेको छ । पछिल्लो पटक केही महिनाको अवधिमा श्रेष्ठ र गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनित गर्ने निर्णयले त संविधानको मर्म माथि मात्र होइन, जनमतको धज्जी उडाउने काम गरेको छ । जव जनताबाट पराजित नेताहरुलाई नै खोजी खोजी सांसद मन्त्री बनाइन्छ भने आवधिक निर्वाचन, वहुमतको आधारमा सरकार गठन गर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतीको के अर्थ ? चुनाव हारेपछि एउटा अवधि अर्थात ५ वर्षको लागि पनि सत्ताबाट वाहिर बस्न सक्दैनन् भने त्यस्ता नेताले देश र जनताको लागि ‘जस्तो पनि त्याग गर्न सक्छु’ भन्दै गफ गर्न मिल्छ ?
यहां नेकपाको मात्रै कुरा होइन, संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै पार्टीहरु राष्ट्रिय सभालाई पंगु बनाउने काम गरिरहेको देखिन्छ । निश्चय पनि त्यसमा देशको सबैभन्दा ठूलो र राष्ट्रिय सभामा लगभग एकल प्रतिनिधित्व जस्तो रहेको नेकपाको भूमिका सबैभन्दा धेरै छ । त्यसैले राष्ट्रिय सभाको औचित्य प्रमाणित गर्ने र उसको भूमिका स्पष्ट गर्ने दायित्व पनि नेकपाकै हो । तर, विडम्बना नेकपाको नेतृत्व राष्ट्रिय सभालाई गुट व्यवस्थापनको अखडा बनाइरहेको छ । कुनै नेताले निहुं खोजे भने चोर बाटो प्रयोग गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य र मन्त्री बनाउने प्रचलन बसाउन थालिएको छ । त्यो कुनै पनि अर्थमा जायज मान्न सकिदैन ।
पछिल्लो २४ घण्टामा थप ५१३ जनामा कोरोना पुष्टि, ८ जनाको मृत्यु १६ मिनेट पहिले
पूर्वराष्ट्रपति केनेडी हत्यासँग सम्बन्धित थप कागजात सार्वजनिक गर्न समय लाग्ने ४१ मिनेट पहिले
तिहारकाे लागि ५० हजारभन्दा बढी सयपत्री फूलको माला भारतबाट आयात हुँदै ५३ मिनेट पहिले